Zvinogumbura Zvinhu zvekurega Kutaura kune Vashandisi veWiricheya | Karman® Mawiricheya
Hezvino zvinhu zvisere zvekudzivisa kutaura kumunhu mune wiricheya:
“Ini ndaifanira kushandisa wiricheya kwekanguva, saka ndinonyatsoziva zvauri kusangana nazvo. ”
Chokwadi ndechekuti, hauzive kuti mumwe munhu anonzwa sei. Unogona kunge wakambotora nguva mu wiricheya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana asi, iwe ungadai usina kusangana nekugona kana kushungurudzika, kusuwa, uye kugamuchirwa kwekushandisa a wiricheya yakazara-nguva yezvese zvako upenyu. Zvichida iyi yaive mamiriro ezvinhu kwenguva pfupi. Kunyangwe zvingave zvakakuomera kuti uchinjike, izvi zvakadaro hazvipe ruzivo rwakakosha muhupenyu hwomumwe munhu.
"Ndakangomiswa ipapo kweminiti." / "Ndiri kungopaka pano kwemaminitsi mashanu."
Ichi chinhu chakajairika chinonzi vanoshandisa wiricheya isiri-wiricheya mushandisi atora nzvimbo yavo. Iko hakuna chikonzero chekutora kuremara kupaka nzvimbo kubva kune avo vanonyatsoida iyo. Kuva mukumhanyirira kana kungoitora kubva kune avo vanoshaya kwemaminetsi mashoma haisi pembedzo uye kusaremekedza mumwe munhu anoida chaizvo. Kupaka munzvimbo dzakaremara pasina mvumo inoshanda kunogona mutengo iwe faindi inosvika kumadhora mazana mashanu patikiti.
“Wakanyanya kunaka kuti uve mu wiricheya"/" Uri kutsvaga munhu mu wiricheya. ” / “Asi uchiri mudiki kwazvo!”
Pane kusafunga kwakakura uko vanhu vari mukati mavhiripu hazvifadzi kana kuhura. Kana iwe uchizorumbidza mumwe munhu, siya iyo wiricheya mairi. Aya ndiwo marumbidziro akachengetedzwa. Kuremara hakuiti'' kusarura. Iko hakuna muganho wezera kana imwe nhanho yekukwezva.
Mawiricheya hazvisi zvevakuru chete. Vamwe vanhu sanganisa hurema nezera, uchitora sechisikigo chikamu chekweguru. Asi chokwadi ndechekuti chero chinhu chinogona kuitika kune chero munhu chero nguva, zvisinei nekuti vangave vakura zvakadii kana kuti vangataridzika sei.
“Unoziva here kuti anonzi ani? Ari mukati wiricheya zvakare! ”
Vanhu vese mu mawiricheya don'' t vanozivana uye havasi chikamu chekirabhu chakavanzika. Kufungidzira izvo wiricheya mushandisi anongobatana nevamwe vanoshandisa wiricheya zvinogona kuonekwa sekusaziva uye kuzvidza.
“Sei uri mu wiricheya? ” / “Chii chaitika kwauri?” / "Chii chawakaita pagumbo rako?"
Kuona munhu kushandisa wiricheya kutenderera hakusi kukoka kubvunza munhu nezvenhoroondo yavo yekurapa. Kune zvikonzero zvakawanda zvakasiyana izvo munhu angave ari kushandisa wiricheya uye inogona kunge yakaoma kana kuomarara kutsanangura. Iva nehanya nenyaya yekuti kubvunza izvi mhando yemibvunzo inogona kuita kuti mumwe munhu agadzikane kana kukonzerwa. Usapindire, kana vachida kukuudza nyaya yavo, vanozoita kana vagadzikana kuzviita.
"Zvese zvinoitika nekuda kwechikonzero"
Chirevo chakadai ndechekuudza munhu kuti ivo varimo wiricheya nekuda kwechimwe chinhu chavakazviitira. Dzimwe nguva zvinhu zvinoitika zvisingaiti kuda a chinangwa. Nepo ichi chiri chirevo chakajairika chinoshandiswa zuva nezuva, ichi ndicho chimwe chezvinhu izvi kudzivirira kutaura kune mumwe munhu mu wiricheya kana haudi kuvakanganisa.
“Ndiri kufara chaizvo kuti handisi mu wiricheya"/" Ini ndingadai ndakafa pane kuva mu wiricheya. "
Wese munhu ane kodzero kune yavo pfungwa, asi kutaura izvi kune mumwe munhu mune wiricheya ane utsinye.
"Unonyatsoda chigaro ichocho here?" / “Nhai mwari, munogona kufamba here? Uri chii iwe kushandisa izvozvo zvenguva iyoyo? ”
Mumwe haafanire kubvunza kana kuita zvekufungidzira nezve muviri weumwe kana kugona kwake.
Vanhu vanoshandisa mavhiripu nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvakasiyana. Ivo vanogonesa rusununguko rwe kufamba. Iwe haudi kugumbura mumwe munhu netsaona. Ehe unogona kunge uchida kuziva. Isu tese tinoda kuziva nemasikirwo. Asi izvi hazvipe iwe kana chero munhu mvumo yekutaura zvisina basa.
Rangarira, vanhu vanoshandisa mavhiripu havana kumbosiyana newe. Saka ratidza rukudzo uye dzivisa kuzviita nekugona kwevamwe. Iva nehanya neumwe munhu uye unzwisise kuoma kwekufambisa a wiricheya pane vanhu.
Kuwana Wiricheya ine Zvishoma kusvika Pasina Mari